Izithako eziqhelekileyo zeCocktail - Malunga Cocktails
I-Senior Fashion And Izinwele
Izithako eziqhelekileyo zeCocktail
Enye yeendlela ezilula zokwakha ii-cocktails ekhaya kukudala iziselo ngezithako osele unazo. Ukuqala ngezithako ezisisiseko, unokongeza abaxube okanye imimoya elula ukwenza iintlobo ngeentlobo zeziselo ezixubeneyo.
Omnye wabaxube abulula ukwenza nasiphi na isiselo sokudibanisa nesoda yeklabhu. Isoda iyangxenga incasa yomoya ngoko ke awuyiseli ngqo, kodwa isakuvumela ukuba ukonwabele ukungafani kwayo kunye namavumba.
ungaxela njani ukuba inja yakho iyafa
Iiresiphi zasimahla zeChampagne Cocktail
Iiresiphi zokusela ezitshisayo
I-11 Frozen Blender Drink Recipes Ngotywala
Uyenza njani into yokusela ngeClub Soda
Yongeza ii-½ of zomoya kwi-aamatye okanye iglasi yekollins.
Gcwalisa iglasi ngomkhenkce.
Yongeza ii-ounces ezi-3 ukuya kwezi-4 zeklabhu yesoda kwaye ugxobhoze.
Yongeza umhlobiso we-citrus wedge, njenge-lemon, i-lime, i-orange, okanye i-grapefruit
Imimoya yokuDibanisa neClub Soda
Phantse wonke umoya uxubeka kakuhle nesoda yeklabhu. Abanye ukuzama:
Ezahlukeneyoiwhiskey(iscotch, ibourbon, iwhiskey, irye)
Iirum (ukukhanya, izinongo, okanye ubumnyama)
I-liqueur enencasa yekofu enjeKahlúa
I-Cola, nokuba yeyokutya okanye yesiqhelo, ixubeka nemimoya ngendlela efanayo neklabhu yesoda.
Uyenza njani i-Cola Mixed Drink
Yongeza ii-½ spirit zomoya ematyeni okanye kwiglasi yeglasi.
Yongeza ii-ounces ezi-3 ukuya kwezi-4 ze-cola kwaye uvuselele.
Yongeza uhombiso lwevili leorenji, ivili lelamula, ivili lekalika, okanye itsheri
Imimoya yokudibanisa neCola
Iirum (ukukhanya, mnyama, okanye izinongo)
IVodka (engathandekiyo, okanye yevodka efana necherry, ivanilla, okanye ijinja)
I-Ginger Ale okanye ibhiya yejinja
Ijinja ale kunyeibhiya yejinjaNika incasa eziqholiweyo kwii-cocktails.
zingaphi iikhabho kwiwayini emhlophe
Uyenza njani i-Ginger Ale okanye iGinger Beer Cocktail
Yongeza ii-ounces ezi-3 ukuya kwezi-4 ze-ginger ale okanye ubhiya wejinja kwaye ugxobhoze.
Yongeza ukuhlobisa i-orange, i-lemon, okanye i-lime twist okanye i-peel.
Imimoya yokuDibanisa neGinger okanye iBhiya
Igumbi(ngakumbi irum emnyama)
Iwhisky (ngakumbi iwhiskey yaseCanada)
Amanzi eetoni anencasa yeklasikhi ekrakra exubeka kakuhle nemimoya.
Uyenza njani iTonic Water Mixed Drink
Yongeza ii-ounces ezi-3 zomoya ematyeni okanye kwiglasi yeglasi.
Yongeza ii-ounces ezi-4 zamanzi eetoni kwaye ugxobhoze.
Gcoba nge-wedge yelamuni, i-lime, okanye i-orenji, ucofe ijusi kwisiselo ngaphambi kokuhombisa.
Imimoya yokuxuba kunye neTonic
Iirum (emnyama okanye eqholiweyo)
Iilamuni kunye / okanye iiLimes kunye neSwekile (ii-Sours)
Ukuba uneelamuni kunye neelime, ungazenzela umxube omuncu ngokudibanisa ijusi yabo nenani elilinganayoisiraphu elula.
Izithako zokwenza iSour
Ounce ukongeza incindi yelamuni esandula ukufakwa, incindi yelamuni, okanye ukudityaniswa kwezi zimbini
Ounce ounce isiraphu elula okanye enye into emnandi efana ne-grenadine okanye i-liqueur emnandi
1 ounces umoya
White iqanda elimhlophe (ngokuzithandela)
I-Cherry kunye ne-orange slice yokuhlobisa
Imiyalelo yokwenza iSour
KwiI-cocktail shaker, Hlanganisa ijusi yesitrasi, isiraphu okanye into eswiti, umoya, kunye neqanda elimhlophe.
Ukuba usebenzisa iqanda elimhlophe, gungqisa ngaphandle komkhenkce. Ukuba akunjalo, yiya kwinqanaba lesithathu.
Gcwalisa isihlukuhli ngumkhenkce kwaye ushukume.
Ukungena kwiglasi yamatye ezaliswe ngumkhenkce.
Gcoba ngesilayi se-cherry okanye i-orange.
Imimoya yokuzama iSour
Iirum (zonke iintlobo)
IiLamuni / iiLimes, iSwekile, kunye neSoda okanye iGinger Beer (Fizzes)
Ukuba uneelamuni kunye / okanye iilime, iswekile, kunye nesoda okanye ibhiya yejinja, ungenza uluhlu lweefizz ngokufaka nje isoda kwi-cocktail yakho emuncu esisiseko.
Uyenza njani iFizz Cocktail
Yenza umuncu njengoko kuchaziwe apha ngasentla ngaphandle kweqanda elimhlophe.
Ukungena kwiglasi yekoll kunye nomkhenkce.
Yongeza ii-ounces ezi-3 ukuya kwezi-4 zesoda kwaye ugxobhoze.
Ukudibana komoya, okumuncu, kunye nesoda ukuzama
I-Gin, i-lemon emuncu, kunye ne-club soda okanye i-lemon-lime soda
Irum, ikalika emuncu, kunye neklabhu yesoda, ilamula-ikalika yesoda, ijinja ale, okanye ibhiya yejinja
IVodka, ilamula kunye / okanye ikalika emuncu, kunye necola, iklabhu yesoda, ilamuni-ikalika yesoda, ijinja ale, okanye ibhiya yejinja
I-Amaretto, i-lemon emuncu, kunye ne-lemon-lime soda okanye i-ginger ale
I-Tequila, i-lime emuncu, kunye ne-club soda okanye i-ginger ale
I-Whisky, i-lemon emuncu, kunye ne-cola, i-lemon-lime soda, i-club soda, i-ginger ale, okanye ubhiya we-ginger
IiLamuni / iiLimes, iSwekile, iSoda, kunye neeHerbs okanye iiBerries (iSmashes)
Unokwenza ukutshitshisa ngokuthatha inhlanganisela engentla kwaye ungeze imifuno edibeneyo, iziqhamo okanye amajikijolo.
Uyenza njani iSmash Cocktail
Kwi-cocktail shaker, udaka amaqabunga amaqabunga, amajikijolo, okanye i-wedge yeziqhamo kunye ne-ounce yesiraphu elula.
Yongeza i-ounce yelamuni okanye incindi yelamuni kunye nee-½ 1 zomoya.
Yongeza umkhenkce kwaye ugungqise.
Ukungena kwiiglasi zekhephu ezigcwele ngumkhenkce.
Phezulu kunye nee-ounces ezi-3 ukuya kwezi-4 zesoda kwaye ugxobhoze.
Mint, lime ezimuncu, rum, club soda (UMojito)
Amaqunube amnyama, ikalika emuncu, ivodka, ibhiya yejinja (iblackberry iMule nyulu)
I-mint, i-lime emuncu, i-bourbon, i-soda (njengejulep)
I-wedge ye-orenji, i-lemon-lime emuncu, iwhiskey yaseCanada, i-ginger ale
Ukuba womileivermouth, xuba kunye ne-gin okanye ivodka ukwenzaiklasi yemartiniokanye aivodka martini.
I-Cocktail Bitters kunye neSwekile
UngasebenzisaIndawo ekrakra yecocktailkunye ityhubhu yeswekile (okanye itispuni e-1 yeswekile) yokwenzaii-cocktails ezindala.
zingaphi i-diapers kunyaka wokuqala
Uyenza njani i-Cocktail endala
Kwiglasi yamatye, yongeza ii-dashes ezimbini ze-bitters kwi-cube yeshukela.
Yongeza ukutshiza kwamanzi kunye nokuxuba ukuxuba nokunyibilikisa iswekile.
Yongeza ii-ounces ezi-3 zomoya omdaka kunye necube okanye ezimbini. Khuthaza.
Gcoba nge-citrus peel.
Imimoya eza kusetyenziswa kwiiCocktails ezindala
Iwhisky okanye iwhiskey
Ijusi yeziqhamo ixubeka ngokuthe ngqo nangawo nawuphi na umoya. Xa uxuba ijusi yeziqhamo kunye nemimoya, kuya kufuneka usebenzise i-cocktail shaker ukufumana utywala kunye nejusi ukudibanisa.
Uyenza njani iJuice yeziqhamo eziTyiweyo
Kwi-cocktail shaker, hlanganisa ii-ounces zomoya kunye nee-ounces ezi-3 zejusi.
Ijusi yeorenji kunye nevodka
Ijusi yeinanapple kunye nerum
I-Lemonade kunye ne-whisky okanye i-gin
Ijusi yeCranberry kunye nevodka okanye irum
Yenza iZiselo eziMxube kwiZithako onazo
Akudingeki ukuba ube ngumxube wokuxuba ukwenza ii-cocktails ezimnandi. Ukuqondaindlela yokuxuba iziselonokwazi ukuba zeziphi iincasa ezidityaniswe kakuhle kunokukunceda wenze iziselo ezimnandi ezixutyiweyo ekhaya kwizithako osele unazo kwiikhabhathi zakho nakwifriji.
Ngaphezulu Size Wedding Apparel Imbali Yedance Isitayile Esinenwele Iimveliso Zeenwele Amacala
Abantwana Iincwadi Imiboniso Yeslides
Isikolo Ukhuseleko Uphando Njengeendlela
Ikrisimesi Imbali Njenesithethe
Imitshato Imiboniso Yesilayidi
uqala nini ukufumana imibimbi
ukufundwa kwetestamente entsha yemingcwabo kulungile
imisebenzi eqesha abaneminyaka eli-16 ubudala
unokucoca ngehydrogen peroxide
Kude kube nini iikati zizala
yasebenza njani ikhamera yokuqala
Inja ayiyi kulala ebusuku
Iikati General Info
Ukucoca Imiboniso Yeslides